AFPMG ho an'ny turbin-drivotra kely sy angovo Hydro
Manamboatra andian-tsarimihetsika vaovao mahery vaika, endrika disc, anatiny, ivelany (ivelany) rotor, famokarana telo, dingana Axial Flux Permanent Magnet Generator (AFPMG) miaraka amina stator tsy misy vy (tsy misy vy ).AFPMG miantoka ny fampisehoana tsy voatanisa izay hankasitrahana tokoa amin'ny alàlan'ny fanentanana mivantana turbine (SWT) sy mpanamboatra Hydro Power.AFPMG dia manome tombony raha ny habeny sy ny bika aman'endriny. Ny firafitry ny nify iray an'ny AFPMG dia tsotra, ary ny fotokevitra fanamafisana miaraka amin'ny rafitry ny stator dia manome fampivoarana tsara sy fahombiazana ambony.
Fahombiazana ambony amin'ny hafainganana ambany
Tsy misy fatiantoka mivezivezy, tsy misy simba varahina noho ny fientanentanana mavesatra ary tsy misy fatiantoka stator amin'izao fotoana izao amin'ny stator tsy misy vy (tsy misy dikany)
Ny fahombiazan'ny AFPMG, arakaraka ny modely, dia mahatratra 90%.
Dimension kely sy lanja kely
AFPMG dia maivana sy marefo, tsotra ny fananganana. Ny mpamokatra dia mampiasa metaly tsy dia be loatra amin'ny fananganana azy, raha mbola matevina ary manana fiainana lava tokoa.
Ny lanjan'ny kely sy ny refin'ny generator dia ahafahana mampihena ny habeny sy ny vidin'ny turbine rivotra rehetra.
Ny habetsaky ny fahafaha-manao manokana (famoahana haavo isaky ny lanjan'ny mpino) no tena mampiavaka an'ireo mpamokatra mifaninana. Midika izany fa miaraka amin'ny refy sy lanja mitovy.
Vola kely fikolokoloana kely
AFPMG dia mitondra fiara mivantana, tsy misy kitapo, rafitra tsy misy menaka, fiakaran'ny hafanana
Ny fahombiazan'ny angovo avo indrindra amin'ny hafainganam-pandeha ambany indrindra amin'ny indostrian'ny indostria dia midika fa afaka manohana karazana karazana turbine avoakan'ny rivotra ny mpamokatra.
Ny fampiasana ny etona rivotra dia mampihena ny vidin'ny fikojakojana ary koa manamafy ny fizakan-tena amin'ny herin'ny herinaratra.
Toraka kely fanombohana kely
Ny AFPMG dia tsy misy trafikana cogne sy torapasika misy torapasika, ka ny tsilo fanombohana dia ambany be, ho an'ny turbine rivotra kely (SWT) mivantana, ny hafainganam-pandehan'ny rivotra manomboka amin'ny 1m / s.
Azo itokisana tsara
Tena mikotrokotroka, malefaka be, tsy misy fehin-kibo mekanika, fitaovam-pandrefesana na fitaovam-pandrika, lava andro
Ny tontolo manodidina ny tontolo iainana
Ny haitao sy ny teknolojia madio 100% ampiasaina amin'ny famokarana mandritra ny fotoam-panompoany lava sy ny fanodikodinana ho avy dia tsy manimba tanteraka ny tontolo iainana.
· Fampiharana lehibe
· Mpanamboatra rivotra kely (SWT)
· Jiro elektrika kely entin'ny motera milina na solika,
· Masinina mitondra fiara mandeha amin'ny herinaratra, toy ny moto sy mpanamboatra.
· Ny fampiharana ny AFPMG dia manolotra vahaolana iray hafa eo amin'ny tontolon'ny mpamokatra herinaratra na milina elektrika amin'ny ankapobeny. Ny fananganana endrika disc sy ny endri-javatra elektromisika mahasoa dia maneho ny fiasa lehibe amin'ny famokarana angovo herinaratra hafa ary ao anatin'ny rafitra mandeha amin'ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra.
Ny fitaterana ny vatan'ny Magnet Generator maharitra (PMG)
Ny fananganana sy ny fampiharana ara-teknika dia mahatonga ny Permanent Magnet Generators (PMG) ho safidy tsara ho an'ny fampiharana kely turbine (SWT).
Ny sehatry ny PMG izay miasa dia manarona ny filan'ny turbine rivotra (SWT). Ho an'ny turbine rivotra 1-5KW, dia afaka mampiasa stotor iray tokana an'ny AFPMG, ho an'ny turbine 5KW-50KW, afaka mampiasa AFPMG miaraka amina fananganana statorista tokana rotor tokana.
Ny taham-pahefana eo ambony 50KW dia rakotry ny Radial Flux Permanent magnet Generator (RFPMG).
QM-AFPMG Inner Fanodina QM-AFPMG ivelany Fanodina
modely naoty fivoahana fahefana (KW) naoty hafainganam-pandeha (RPM) naoty fivoahana Zintin'aratra Weight (Kg) modely naoty fivoahana fahefana (KW) naoty hafainganam-pandeha (RPM) naoty fivoahana Zintin'aratra Weight (Kg)
1. Ny refy sy ny fandeferana
2. Ny herin'aratra, ny volon-koditra ary ny RPM
3. Fanadinana fanoherana ny insulated
4. manomboka torsi
5. Tariby mivoaka (mena, fotsy, mainty, maitso / tany)
1. Toeram-piasana: eo ambanin'ny haavon'ny 2,500 metatra, -30 ° C ka hatramin'ny +50 ° C
2. Alohan'ny hametrahana azy dia manodina moramora ny moty na trano fonenana mba hanamafisana ny fanodinana fihodinana, tsy misy feo tsy mahazatra.
3. Ny famoahana AFPMG dia dingana telo, telo tariby, alohan'ny fametrahana, ampiasao 500MΩ Megger mankany
jereo ny fanoherana ny insulation eo anelanelan'ny tariby famoahana sy ny tranga, tsy tokony ho latsaky ny 5 MΩ
4. Raha AFAFG no mpamorona rotor anatiny, ao anatin'ny dingana fametrahana, dia tokony hiantoka fa ny fikorontanana hidin-trano no toerana tokony hatao.
Ady: 2-5 taona